१ लाख संक्रमित घरमै : RajdhaniDaily.com
Home भर्खरै १ लाख संक्रमित घरमै
निर्देशिका भन्छ, बिरामीको नियमित अनुगमन
काठमाडौं । देशभर १ लाख २ हजार ४ सय ५५ कोरोना संक्रमित घरमै छन् । सरकारले उनीहरूको अवस्थाबारे चासो नदिएकोसमेत पाइएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक दिन कम्तीमा तीनपटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने, हरेक दिन दुईपटक स्वास्थ्य अवस्थाबारे सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन वा एसएमएसमार्फत जानकारी गराउनुपर्छ । तर, यो अवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन ।
त्यस्तै, होम आइसोलेसन बस्दा भाँडाकु“डा, कपडा धुन पञ्जा लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । घरमा रहेका बिरामी नियमित अनुगमन गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
इपीडिमियोलोजिस्ट डा. विराज कर्माचार्यले होम आइसोलेसनमा नबस्दा ग्रामीण भेगमा समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिने दर बढेको औंल्याए । गाउँमा निषेधाज्ञा उल्लघंन भइरहेको र सामाजिक कार्यसमेत जारी रहेको उनले बताए ।
‘स्थानीय निकायले कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ डा. कर्माचार्य भन्छन्, ‘संक्रमितको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा हेर्नुपर्छ । ज्वरो आइरहने समस्या देखिए स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ ।’
हरेक गाउँमा संस्थागत आइसोलेसन व्यवस्था गरिनुपर्ने र उच्च जोखिममा रहेका स्थानमा सामूहिक कोरोना परीक्षण गर्न आवश्यक रहेकोमा कर्माचार्य जोड दिन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जनस्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मास्क समुचित प्रयोग, भौतिक दूरी र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने खा“चो उनले औंल्याए ।
६ हजार ६ सय ४८ डिस्चार्ज
देशभर आइतबार ६ हजार ६ सय ४८ संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर हालसम्म ३ लाख ३९ हजार ७ सय ५६ निको भएका छन् । आइतबार ७ हजार ३ सय ६८ जनामा कोरोना देखिएको छ । सक्रिय संक्रमित संख्या १ लाख १० हजार २ सय ६३ पुगेको छ । ७ सय १ क्वारेन्टाइनमा छन् । आइतबार देशभर १ सय ४५ संक्रमितको मृत्यु भएस“गै मृतक संख्या ५ हजार १ पुगेको छ ।
संक्रमितले कसरी सुरक्षित रहने ?
संक्रमितले होम आइसोलेसनमा संक्रमितलाई हावा खेल्ने तथा प्रकाश पर्याप्त आउने छुट्टै कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलोयुक्त खानेकुरा खानुपर्नेहुन्छ ।
प्रयोग गरिएका भाँडा सुरक्षित रूपमा सफा गर्ने र राम्रोस“ग सुकेपछि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । हात धुने स्थान संक्रमणको स्रोत हुन सक्ने भएकाले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै प्रयोग हुने वस्तु ढोका, टेबललगायत सामान निसंक्रमण गरी नियमित सफा गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
संक्रमितको हेरचाह र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने व्यक्ति र संक्रमण देखिएकाले अनिवार्य सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेछ । बढी जोखिममा रहने समूह, दीर्घरोगी, सुत्केरीलाई संक्रमितको सम्पर्कबाट टाढा राख्ने निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएमा, छाती दुखे वा भारी भएको महसुस भएमा, ओठ तथा अनुहार निलो देखिएमा, होस हराए वा अन्य कुनै जटिल अवस्था देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउन निर्देशिकामा भनिएको छ ।
Editor-Picks प्रशान्त वली - October 19, 2020 0
Breaking News प्रशान्त वली - March 5, 2021 0
प्रमुख प्रशान्त वली - January 25, 2021 0
अर्थ प्रशान्त वली - September 13, 2020 0
प्रमुख प्रशान्त वली - February 20, 2021 0
सूचना प्रविधि प्रशान्त वली - March 2, 2020 0
Not-to-be-missed प्रशान्त वली - April 20, 2020 0
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - February 9, 2021 0
प्रदेश ६ प्रशान्त वली - April 11, 2020 0
कालिकोट । विश्वभरि महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको रोकथाम, उच्च सतर्कता, सावधानी तथा विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि तिलागुफा नगरपालिकाले १ करोड १५...